Imigomo Yesevisi - PDF.to
Ngezansi ukuhunyushwa okunzima kwemibandela yethu yokusebenza yesiNgisi nenqubomgomo yobumfihlo yesiNgisi yezici zomthetho zombili zisebenza kuphela ngesiNgisi
Ubumfihlo bakho kubalulekile kithi. Kuyinqubomgomo yakwaPdf.to ukuhlonipha ubumfihlo bakho maqondana nanoma imiphi imininingwane esingayiqoqa kuwebhusayithi yethu, i- https : //pdf.to , namanye amasayithi esisebenza futhi esisebenza kuwo.
Sicela ulwazi lomuntu uqobo uma siludinga ngokweqiniso ukukunikeza insizakalo. Sikuqoqa ngendlela efanelekile nangokomthetho, ngolwazi lwakho nangemvume. Sikwazisa futhi ukuthi kungani sikuqoqa nokuthi kuzosetshenziswa kanjani.
Sigcina kuphela imininingwane eqoqwe isikhathi eside ngangokunokwenzeka ukukunikeza insizakalo yakho oyicelile. Imiphi imininingwane esiyigcinayo, esizoyivikela ngaphakathi kwezindlela ezamukelekayo kwezohwebo ukuvimbela ukulahleka nokweba, kanye nokufinyelela okungagunyaziwe, ukudalula, ukukopisha, ukusebenzisa noma ukuguqulwa.
Asabelani ngolwazi oluhlonza mathupha esidlangalaleni noma nabantu besithathu, ngaphandle uma kudingwa umthetho.
Iwebhusayithi yethu ingaxhumeka kumasayithi angaphandle angasebenzi thina. Uyacelwa ukuthi wazi ukuthi asinamandla okulawula okuqukethwe nokuziphatha kwala masayithi, futhi awukwazi ukwamukela umthwalo wemfanelo noma isibopho ngezinqubomgomo zazo zobumfihlo.
Ukhululekile ukwenqaba isicelo sethu semininingwane yakho, ngokuqonda ukuthi singakwazi ukukunikeza eminye yezinsizakalo zakho ozifisayo.
Ukuqhubeka nokusebenzisa iwebhusayithi yethu kuzothathwa njengokumukelwa kwemikhuba yethu mayelana nobumfihlo nemininingwane yangasese. Uma unemibuzo mayelana nokuthi siyiphatha kanjani imininingwane yomsebenzisi nemininingwane yomuntu, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi.
Le nqubomgomo isebenza kahle ukusuka ngomhlaka 6 Juni 2019.
Amafayela alayishiwe ayasuswa ngemuva kwamahora amabili bese amafayela aguquliwe esuswa ngemuva kwamahora angama-24. Ukuze unciphise ukuhlukunyezwa, sibeka ikheli le-IP elenzelwe ukuguqulwa lapho ifayela seliguqulwa, abukho ubudlelwano kumafayela nekheli le-IP. Ngemuva kwehora elilodwa ikheli le-IP liyasuswa ngakho-ke kukhululekile ukwenza okunye ukuguqulwa.
Guqula kusuka ku-PDF
I-PDF eya ku-PNG
I-PDF eya ku-DOC
I-PDF to Image
I-PDF to TIFF
I-DOC kuya ku-PDF
I-DOCX kuya ku-PDF
I-Excel kuya ku-PDF
I-XLS kuya ku-PDF
I-XLSX kuya ku-PDF
JPG kuya ku-PDF
PNG kuya ku-PDF
I-PowerPoint kuya ku-PDF
PPT kuya ku-PDF
I-PPTX kuya ku-PDF
I-HTML kuya ku-PDF
ODT kuya ku-PDF
JPEG kuya ku-PDF
ICO kuya ku-PDF
BMP kuya ku-PDF
SVG kuya ku-PDF
I-TIFF kuya ku-PDF
Isithombe esiya ku-PDF
Susa amakhasi e-PDF
209,349 ukuguqulwa kusukela ngo-2019!
Inqubomgomo yobumfihlo - Imigomo Yesevisi - Xhumana nathi - API
Yenziwe ngu nadermx - © 2020 PDF.to
Udlule umkhawulo wakho wokuguqula ihora nehora, ungaguqula amafayela akho 59:00 noma Bhalisa futhi uguqule manje.
Ukuba yi-Pro kukunika lezi zici
🥇 Azikho Izikhangiso
☝ Ukuguqulwa okungavinjelwe
🥇 Ukuguqulwa kwe-OCR
🐱 Ulayini wokubaluleka
🚀 Isici Sesicelo Sokuzikhethela
Kukhokhwa kube kanye kuphela
Kuvuselelwa ngaphandle kokuthi kukhanseliwe